Ma akpụkpọ ụkwụ ndị na-eyi uwe pantyhose - ọchịchịrị, ìhè, nwa, agba, naịlọn, tights na grid - na akpụkpọ ụkwụ dị aṅaa ọ ga-ekwe omume na ihe ọ na-agaghị ekwe omume ibu
Akpụkpọ ụkwụ na pantyhose - esi emepụta otu ihe oyiyi na echiche nke stylists
A na-akpọzi ejiji nke oge a dịka onye na-egbuke egbuke. E kwuwerị, otu afọ ole na ole gara aga, iwu nke ịke bụ kpọmkwem na njedebe. E nwere ihe doro anya na taboos na-amachibido ụfọdụ akwụkwọ. Taa, ndị stylists na-emekarị ka ndị na-eme ihe dị mma, bụ nke na-akpata ọtụtụ esemokwu. Otu n'ime ndị ahụ bụ akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ na pantyhose.
Enwere m ike ịkpụ akpụkpọ ụkwụ na pantyhose?
A na-akọwa nke a dị ka nke a na-apụghị ịgbagha. E kwuwerị, mmadụ ole, ọtụtụ echiche. Otú ọ dị, n'ịbịaru ndụmọdụ nke ndị na-emepụta ihe, ọtụtụ n'ime ha kwetara ụdị nchikota. Dịka ọmụmaatụ, pantyhose na akpụkpọ ụkwụ Evelina Khromchenko, onye a ma ama na-emepụta ejiji na onye edemede, na-enye ịhọrọ ụda olu. A ga-akwụ ụgwọ nlebara anya maka nhọrọ nke ngwa. Khromchenko kwenyere na enweghi ike ihu ihe a, na akpụkpọ ụkwụ dịka o kwere mee. Ma ọ naghị agọnahụ ịdị mma na nkwekọ nke ọdịdị dị nro na- acha oji , bụ nke na-eme ka ọganihu too ogologo.
Akpụkpọ ụkwụ na pantyhose 2017
N'afọ a, ejiji egwu n'emeghị egwu na-egosi nzukọ ahụ, bụ oge ole gara aga gara aga na-akpọ ụbụrụ na-adịghị mma. Ụfọdụ ndị na-eme ihe ngosi na-egosipụta ụzọ a nke okike na ihe e ji amata nchịkọta ha. Mana anyi nile ghotara na ala di iche na ndu kwa ubochi. Ndị na-edepụta ihe ndị a edepụtawo ihe ndị a kapịrị ọnụ mgbe tights n'okpuru ụkwụ ụkwụ kwesịrị ekwesị:
Akwa akpụkpọ ụkwụ na-acha odo odo . N'iji nlezianya na-egbukepụ egbukepụ na mkpebi ndị na-egbuke egbuke na onyinyo ahụ, ngwa ngwa nke dị iche na agba akpụkpọ ụkwụ ga-abụ nhọrọ mbụ, na-emesi onye ọbụla ike.
Akpụkpọ ụkwụ e mechiri emechi na pantyhose . Okwu a nwere ihe abụọ. Na nke mbụ, ọ na-adaba na okwu na-arụ ụka banyere nkwonkwo akpụkpọ ụkwụ n'oge okpomọkụ na ngwa. Ma, n'aka nke ọzọ, a pụrụ ịkpọ ụdị ihe a mechiri emechi n'ụdị akpụkpọ ụkwụ, nke na-enye ohere ịmechaa ngwụcha.
Akpụkpọ ụkwụ na pantyhose na ụkpụrụ . Ọ bụrụ na ị kpebie ihe dị otú a, echefula ya na saturation na nchapụta nke nbipụta. Ọ ka mma ma ọ bụrụ na ederede ma ọ bụ embossed. Ọ dị mkpa iji jikọta ụta dị otú ahụ na uwe ma ọ bụ ejiji ụda akpụkpọ ụkwụ.
Akpụkpọ ụkwụ na pantyhose naịlọn
Ole na ole mmadụ na-eche echiche banyere ijikọta akpụkpọ ụkwụ okpokoro n'oge oyi na ngwa ngwa oyi. Mana ajụjụ a bụ ma akpụ akpụ akpụkpọ ụkwụ na-eyi uwe, na-egbu mgbu. Ọ dị mkpa ịghọta ebe ị ga-aga n'ụdị a. Ịmepụta azụ ahịa, iji ngwa ga-abụ ihe a na-apụghị izere ezere, ebe ọ bụ na ejiji ejiji anaghị ekwe ka oghere ụkwụ. A na-anabatakwa ihe na-enweghị obi ụtọ na usoro ịkụ egwú, ebe ọ bụ ọbụna na-achọsi ike iji mesie ihe okike ike. Na na mgbede mgbede bụ ịhapụ echiche a. Ka anyị chọpụta otú ị ga - esi yi akpụkpọ ụkwụ na ihe ndị a na - eme ka ọ dị mma:
Akwa akpụkpọ anụ na fishnet tights . Nnukwu ụdị nwanyị na-adọrọ mmasị na-egosi ụdị ihe eji eme akwa ma ọ bụ abstraction. Ma na nke a, ọ dị mkpa iji zere ihe ọ bụla dị iche iche na njupụta nke hues.
Agba agba . Nhọrọ mmeri-mmeri bụ mgbakwunye na agba akpụkpọ. Ma ọ bụrụ na akpụkpọ ụkwụ ahụ nwere ihe mkpuchiri emechi, ọ dịghị onye ga-egosiputa ihe nzuzo gị.
Akpụkpọ ụkwụ na pantyhose na-enweghị ihe mgbochi . Ọ bụrụ na mkpịsị aka gị na-ezu ike megide ụdọ mmiri, ma ọ bụ na mpaghara a, ngwa ahụ nwere eriri na-agbanwe ọchịchịrị, mgbe ahụ nhọrọ dị otú ahụ na-emesi enweghi uto. Ya mere, họrọ ụdị ndị siri ike ma sie ike.
A na-eji akpụkpọ ụkwụ akpụ ụkwụ n'enweghị ihe ọ bụla
Ụdị oge a bụ ihe nnwale na nnwale. Na iji mee ka akpụkpọ ụkwụ na-acha ọcha ma ọhụụ dị mma, a na-anwale ndị mmepụta ahụ, ma ha nwetara ngwọta. Otu n'ime ihe a na-eme nke ọma maka akpụkpọ ụkwụ na mkpịsị aka. Ụdị dị otú ahụ na-agbaso ụkpụrụ iwu niile. Akwụsị ụkwụ na-anọgide na ụkwụ efu, dịka aha a chọrọ iji wuchaa ya. Ma ọ bụrụ na ịhọrọ ụdị dị iche iche na ojiji siri ike ma ọ bụ na-enweghị ntụpọ, mgbe ahụ ọ dịghị onye ga-achọpụta na i jiri nkọwa zuru ezu. Nke a na-aga nke ọma maka mgbede dị mma nke oge ọkụ.
Ngwongwo na grid na akpụkpọ ụkwụ
A na-ewere usoro a dịka ihe ịga nke ọma. Ụdị ejiji a na akpụkpọ ụkwụ, dịka ndị stylists si kwuo, jikọtara ọnọdụ ndị ọhụrụ kachasị ọhụrụ na-ele anya n'otu ọnụ na feministically. Ihe kachasị mma, nke nyere aka mebie stereotype nke enweghị ike ịkpụ akpụkpọ ụkwụ okpomọkụ na ngwa, bụ na na nke a, mgbakwunye adịghị arụ ọrụ ọ bụla, mana ọ na-enwe ihe okike zuru ezu. Mgbe ụfọdụ grid bụ ihe ngwọta nke a na-emeghị nke ọma. Mgbe ahụ ọ bara uru itinye ya n'elu tights.
Akpụkpọ ụkwụ na nwa pantyhose
Ọ bụghị nanị na Evelina Khromchenko ghọtara ụdị nhọrọ dị ka ihe ịga nke ọma. A na-ahụkarị obere kapron pantyhose n'okpuru akpụkpọ ụkwụ na azụmaahịa na ụlọ ọrụ. Nke duo a bụ ezigbo ihe ngwọta maka fashionistas na ụkwụ ụkwụ. A sị ka e kwuwe, ngwa ngwa nke oge ndochi gbara ọchịchịrị na-agbasapụ ma gbadaa ụkwụ. Ndị na-ede akwụkwọ na-ekwe ka otu nchikota nke otu na ụdị dị iche. Egwu nwere ike ịbụ ihe ntanetị nke dị mkpa. Ọbụna nhọrọ nke ngwa nwere ihe ngosi ma ọ bụ abstraction na-emighị ike ga-ekwe omume.
Kedu akpụkpọ ụkwụ ị ga-eyi?
Mgbakwunye maka ụkwụ na-ezo aka na ihe ndị e ji eji ejiji nke oge-oge na oge oyi. Ya mere, imeghe mmechi na-abụkarị nzuzu, n'ihi na ha anaghị edekọ na ụdị nke nkọwa ndị ahụ. Otú ọ dị, e nwere ngwọta ndị na-ekwekọghị ekwekọ. Mgbe ị na-ekepụta otu, ọ dị mkpa ịtụle ọ bụghị naanị ụdị, kama ọ bụkwa agba nke tights na akpụkpọ ụkwụ. Nhọrọ kachasị mma maka stylists bụ njikọ dị otú ahụ:
Omuma akpụkpọ ụkwụ . Ụdị na-ekpuchi ikiri ụkwụ na ụkwụ, lee anya na nylon, lurex, bamboo na ngwa owu. Mkpebi dị otú ahụ kwekọrọ n'ụkpụrụ iwu.
Agbachi ụkwụ ụkwụ ụkwụ . A na-ele ụdị akpụkpọ ụkwụ a anya dị ka ihe dị mma karịsịa na oge mmiri ozuzo na mmiri ọkụ. Ụdị na-ekpuchi ụkwụ dum nwere ike ịnọ n'otu ndò na tights ma ọ bụ dị iche iche na agba.
Keds na sneakers . Nzuzu Kazhualnoe dị mma maka ụdị ọgbara ọhụrụ nke ụta ndị mepere emepe. Na nke a, agba agba na ụdị dị iche iche nwere ụkpụrụ, ụkpụrụ na ihe ịchọ mma ndị ọzọ na-anabata nke ọma.
Kedu akpụ akpụkpọ ụkwụ ị na-agbanye akwa n'ime ụgbụ?
Dịka ama kwuru, a na-ele ụdị mbipute a anya. Enwere ike ijikọ ya na njedebe na mmechi emechi. Ọ bụrụ na ị gaghị edebe uwe mgbatị siri ike, mgbe ahụ, ị ​​ga-achọ otu obere pantyhose na akpụkpọ ụkwụ. Ihe nghota di iche a ga - ejiko ma ugbua kpoo na ihunanya. Maka ihe ndị nwere ọgụgụ isi, ọ ka mma idozi njikọta monochromatic ma họta ntutu ọma ma ọ bụ ihe mmeghe dị ala.
Ejiri ejiji na pantyhose na net
Ọchịchịrị gbara ọchịchịrị na akpụkpọ ụkwụ
Ọ bụrụ na ị kpebie na ọ dị otú a, ị ga-eji nlezianya gụọ ndụmọdụ nke ndị stylists. A na-anakwere akpụkpọ ụkwụ na-acha agba odo odo na foto ahụ, ebe ebe elu ahụ nwere ndo yiri ya na njedebe. Ụda ahụ nwere ike ịdị iche, ma e kwesịrị ịhụ palette n'onwe ya. Ọ bụrụ na ịmepụta oge okpomọkụ ma ọ bụ mgbede na mgbakọ dị otú ahụ, gbakwunye uwe mgbokwasị, bolero ma ọ bụ uwe mgbokwasị na uwe elu ma ọ bụ setịpụ. Nhọrọ a ga - enyere aka ijikọta ihe niile.
Kedu akpụkpọ ụkwụ a na-apụghị eyi na pantyhose?
Na nke oge a, a na-amachibido iwu na ịhọrọ nchịkọta nke tights na njedebe nke eyịm. Ihe kachasị njọ bụ akpụkpọ ụkwụ na tights. N'ebe a, a na-ekwu na akpụkpọ ụkwụ na ụdị ọ bụla ọzọ nwere mkpịsị aka na ikiri ụkwụ, na obere obere eriri na-adịghị ekwe omume ọ bụla. A na-ewere nsogbu ọjọọ dịka ihe dị otú ahụ na ụdị ejiji ma ọ bụ nke a na-agbanye ọnụ. Nhọrọ ọzọ na-adịghị anakwere bụ ịhọrọ ọnyá ma ọ bụ akpụkpọ ụkwụ ọ bụla na-enweghị nzụlite. Enweghị ihe ọzọ ma ọ bụ maka ngwa ngwa na-enweghị atụ.
Nwa nwanyi mara mma
Kedu otu esi eji akwa mkpuchi?
Olee otú ejiji ndị inyom French?
Ụdị akpa ụmụ nwanyị
Kedu ụdị ụdị anụ ákwà?
Kedu ihe ga-eyi swtshot?
Nbudata agbamakwụkwọ n'ọdịdị
Uwe na sneakers
Ulo ahia - ejiji ejiji
Onyinye na akwa uwe atụrụ
Holo-eriri jaket - ọkụ ma ọ bụ?
Ejiji maka ọnụ ọgụgụ zuru ezu
Sinusitis - ọgwụgwọ nke ọgwụgwọ ndị mmadụ n'ụlọ
Ngwakọta nke ejiji na akwa 2016
Ịme ntụrụndụ na-eme egwuregwu n'amaokwu
Kedu ka ị ga-esi na-agba ọsọ mgbe ị na-enyefe?
E kweghị Eddie Redmaine na Hannu Bagshaw ịgbaso Met Gala 2017
Esi esi kwatuo ụlọ obibi?
Dumplings si cheese cheese
Ịdị njikere nke nwata maka ụlọ akwụkwọ bụ ihe niile dị mkpa iji chebaa ndị nne na nna nke ụlọ akwụkwọ ahụ
Ugbu a ma ugbu a: Ndi dike nke mgbasa ozi kachasị amasị gị toro?
Falshkum si na osisi gypsum na aka aka
Kedu ka esi eji kilogram 3 kwa izu?
Kedu esi esi nri eclairs n'ụlọ?
Atụmatụ na Honey Spas
Ekeebe ụmụ nwanyị mmiri-mgbụsị akwụkwọ
6 akụkọ ifo banyere Cuba
Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ na ikiri ụkwụ
Buckwheat na mmiri ọkụ abụọ
Ejiji ihe - okpomọkụ 2015
Eke ejiji 2014
Obodo agbụrụ Geldi
Onyinye maka nwa agbọghọ 5 afọ